I-Linux 5.7-rc5: okhethwayo omusha wokukhishwa wenguqulo yokugcina | Kusuka kuLinux
I-Linux 5.7-rc5: ikhandidethi entsha yokukhishwa yenguqulo yokugcina
Linus Torvalds, nge-LKML, ishicilele esinye isiqephu sezindaba esisha mayelana nokwakhiwa komthombo ovulekile novulekile. Le yinguqulo entsha yokuqokelwa ukhetho. Ngokuqondile, yiLinux 5.7-rc5, esondela ekupheleni kwentuthuko ukuthola inguqulo entsha ye-kernel ozokwazi ukuyifaka maduze kwi-distro oyithandayo ye-GNU / Linux nazo zonke izindaba. Kodwa-ke, uma ufuna ukuyizama manje, ungazama le Khandidethi Yokukhishwa.
Vele, akufanele ususe inguqulo yamanje ye-kernel onayo, ngoba akuyona inguqulo yokugcina futhi ingaba nezinkinga ezithile ezisele ukuthi zipholishwe. Uyazi, futhi ngicabanga ukuthi akudingekile ukuphinda njalo, ukuthi wena ungalanda kusuka kuwebhusayithi esemthethweni ngale Proyect: kernel.org. Indawo efanayo lapho uzothola khona ezinye izinguqulo ze-vanilla kernel njengezinzile ngesikhathi sokubhala: I-Linux 5.6.12.
Kepha Izindaba I-Linux 5.7-rc5, iqiniso ukuthi njengoba kushiwo ku-imeyili ekhishiwe, inguqulo ngaphandle kwezinkinga eziningi noma ukushaqeka konjiniyela futhi ngokungafani nokukhishwa kwangaphambilini, kulokhu kuncane kune-average. Okungeyona idatha okufanele ithathwe njengento engeyinhle noma enhle, noma ngabe ihlangana kakhulu, kungcono ...
Ku-rc4 edlule, ibinosayizi ongaphansi kokujwayelekile, ngokunokwenzeka ngenxa yokushoda kwabashayeli esitaki senethiwekhi esivame kakhulu. Phakathi kwezinguquko ezilethwa yile rc5, eminye iminikelo ifakiwe kulokhu. Ngakho-ke usayizi omkhulu yinto engalindeleka. Ngaphezu kwalolo shintsho, kube khona futhi eminye iminikelo nokulungiswa. Kodwa-ke, kunezinguquko lapha nalaphaya, ngaphandle kwesigaba esikhethekile lapho iminikelo ivelele khona.
Por ejemplo, ungathola ukuthuthuka kubashayeli benethiwekhi njengoba sengikwenzile, izibuyekezo zekhodi encike ekwakhiweni okuthile okufana ne-RISC-V, kwisici sokwenza izinto ezibonakalayo njenge-kvm, amathuluzi, imibhalo, njll.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-Linux 5.7-rc5: ikhandidethi entsha yokukhishwa yenguqulo yokugcina
IMicrosoft izokhokha kuze kufike ku- $ 100,000 ngobungozi ku-Azure Sphere Linux